Ny fampiharana fanovana sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny iPhone
Ny Mpanampy Manokana, na ny Tonian-dahatsoratry ny Sary, dia manam-pahaizana manitsy ny sary sy / na ny sary hamoahana mifanaraka amin'ny torolàlana efa voafaritra mialoha. Mpanampy iray miasa eo ambany fanaraha-mason'ny mpaka sary na matihanina hafa ary manome serivisy fanovana ho takalon'ny sarany. Amin'ny fisafidianana sary sy sary, ireo mpanonta sary matihanina dia mandinika tsara ny filan'ny mpanjifany, ny famoahana fitsipika ary ny teti-bola. Na dia miara-miasa akaiky amin'ny mpaka sary aza ny mpanampy dia manova sary hita an-tserasera ihany koa izy ireo.
Ny ankamaroan'ny mpaka sary matihanina dia hanakarama mpanampy manokana. Nandritra ny taona maro dia nilaina ny tonian-dahatsoratra mahaleo tena mba hahitan'ireo mpaka sary tsy miankina mpaka sary ho an'ny fampakaram-bady, fihaonana, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, fety fitsingerenan'ny taona, ny sarin'ny fianakaviana, ny piknikan'ny orinasa, sns. Ny mpanonta sary an-tserasera koa dia manana andraikitra lehibe hanampiana ny olona hitahiry sy hizara fahatsiarovana amin'ny Internet. Olona maro izay mamorona sary nomerika ho an'ny tranokala no hahazo tombony amin'ny mpaka sary tsara, izay manana fahatakarana mazava momba ny teknolojia tafiditra ary manana traikefa amin'ny fanovana sary.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, misy tranonkala marobe manome serivisy fanovana sary maimaimpoana. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpaka sary dia tompona fandraharahana mahatalanjona mahatsapa fa ny fampiasana serivisy maimaimpoana dia mampihena ny maha matihanina azy ireo. Noho io antony io dia mandoa serivisy ny ankamaroan'ny mpaka sary mba hahazoana antoka fa voahitsy araka ny tokony ho izy ny sarin'izy ireo. Tsy rariny izany, fa ilaina koa ny miaro ny tombotsoan'ny orinasany. Matetika ireo mpanonta sary matihanina dia manakarama orinasa lehibe satria manome lanja ny maha-matihanina azy ireo tahaka ny fahaizany mamorona mamorona sary mahaliana ilay orinasa.
Ny fahaiza-manao takiana amin'ny maha-mpamoaka sary tsara dia kely azy. Na dia tsy misy taona marina hanombohana fanovana aza, ny ankamaroan'ny mpaka sary dia manomboka miofana amin'ny telo ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona, fa maro kosa no mbola hiasa amin'ity vanim-potoana ity aorinan'izany. Ireo matihanina ireo dia afaka mianatra haingana satria, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia misy sary marobe ilain'izy ireo ovaina ao anatin'ny fotoana fohy. Ny ankamaroan'ny mpaka sary dia manana portfolio misy ny asany tsara indrindra, noho izany dia zava-dehibe ho azy ireo ny mampiseho hatrany ny mety ho mpaka sary ny asany.
Ny mpaka sary tsara, tsy toy ny matihanina hafa, dia tsy mihevitra ny asany ho asa mora. Mila faharetana sy fikirizana ny fanamafisana ny fahaiza-manao ka hatramin'ny ahafahan'izy ireo manafatra fifanarahana lehibe iray amin'ireo mpaka sary matihanina hafa. Ny mpaka sary tsara koa dia mianatra tsy tapaka momba ny teknolojia vaovao. Mety asaina izy ireo ho mpandray anjara amin'ny magazine na tranokala, izay mitaky azy ireo hahafantatra ny rindrambaiko vaovao ampiasaina. Ny serivisy fanovana sary dizitaly dia mitaky fotoana lavorary, fa ny faharetana miandry io fahalalana io ho raikitra amin'ny asany dia mendrika ny ezaka ho an'ny matihanina maro.
Ny mpaka sary sasany mpanonta sary dia miasa manokana, fa ny sasany kosa miasa tsy miankina. Malalaka kokoa ny mpaka sary tsy miankina, satria tsy mila manolo-tena amin'ny tetikasa maromaro izy ireo na voafehin'ny karazana torolàlana momba ny famoahana. Anjaran'ny mpaka sary tsy miankina ny mahita ny fandaharam-potoanan'izy ireo manokana ary mandray izany am-pahamatorana. Mpaka sary matihanina maro no handray tetikasa kely mandritra ny herinandro na iray volana, mandra-piorenany ary hahafantaran'izy ireo fa afaka mandray andraikitra lehibe kokoa izy ireo nefa tsy misy olana.
Ny fampiharana fanovana sary maimaimpoana tsara indrindra dia fitaovana matanjaka be izay mamela ny olona iray hanao ny sariny ho toy ny nalaina segondra vitsy monja taorian'ny nandraisany azy ireo. Betsaka ny olona mampiasa ireo rindranasa ireo hanovana ny fisehoan'ny sariny, hanisy lohateny sy fanazavana, hanitsiana ny lokony, ary hanamboatra tsipika mena sy maso miolakolaka mihitsy aza. Ny freebies tsara indrindra dia feno endri-javatra lehibe an-taonina, izay mpaka sary matihanina ihany no tsy mahazo miditra. Ny fampiharana fanovana sary matihanina dia afaka manova tanteraka ny fomba fijerin'ny sarin'ny olona iray.
Ny fampiharana fanovana sary maimaimpoana tsara indrindra ho an'ny IOS dia Snapseed. Ny interface dia mitovy amin'ny zavatra hitanao amin'ny mpanonta printy tena izy, ka tsy hisy hieritreritra fa tsy Photoshop. Mora ny mampiasa ny fanaraha-maso ary mahatakatra fa afaka mahazo aina ny rehetra amin'ny fampiasana azy ao anatin'ny fotoana fohy. Ny interface sy ny interface interface-friendly dia manamora ny fandraisan'ny tsirairay sy ny fividianana rindrambaiko toy ny fizarana haino aman-jery sosialy, ny vokany ary ny fampianarana.